Igbo, Romans, Lesson 017 -- He who Judges Others Condemns Himself (Romans 2:1-11) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 017 (He who Judges Others Condemns Himself)
NDI ROM 2:6-11
6 ‘’onye g nyeghachi onye o bula dika omume ya si di”:7 ndu ebighi-ebi nye ndi n’achigidere n’eme ezi ihe choro otuto, nsọpuru na anwughi anwu; 8 kama ọ buru ndi nāchọ nkpuru-obi onwe-ha, ma ha adighi-erubere ezi-okwu isi, kama ha n erube isi na ntị ozi-ozi na akwụkwọ ozi, 9 nkpagbu na nkpab ,u, megide nkpuru-obi ọ bula nke madu nke n evilme ihe ọjọ, nke ndi mbu na ndi Grik; 10 ma otuto, nsọpuru, na udo diri onye ọ bula nke n ime ezi ihe, nke-mbu na onye-Ju na onye Grik. 11 N'ihi na Chineke adịghị ele mmadụ anya n'ihu.
Nwanne m, ị maara ụkpụrụ dị n’ikpe nke Chineke? Mmadu niile na-agbaga oge a di oke nkpa, ma onye nwere uche ma nwee uche bu onye n’eji onwe ya dozie awa ahu. Onyeozi amara gosipụtara anyị nke ọma na, na ikpe ikpe ikpe ikpeazụ, a ga-eleba anya n'omume ọma na omume ọjọọ anyị dị ka ebe ikpe anyị ikpe. Na Matiu 25, Kraist na-eme ka anyị mata na omume ịhụnanya n’ime ndị erughị ala, nke kacha nta, na-eleda anya, ogbenye, na adịghị mfe bụ ihe dị mma n’anya Chineke. Kraist ekwuputaghi ibu onu, ikpe ekpere, ije ije, na inye onyinye ebere ka odi ezi ebere, kama, o bu ezi ndi obi oma nyere ndi ebere.
Site n'ọrụ nzuzo ịhụnanya gị, ọ na-egosi ma obi gị siri ike ka ọ dị nro, nwee mpako ma ọ bụ obi ebere. I bu nwoke guru akwukwo, onye na-eleda ndi nzuzu na ndi nzuzu anya. Ihunanya Kraist huru gi nye ndi nzuzu, ndi ezughi oke, ndi di ha nwuru na ndi nne na nna? A ga-akwụghachi gị ụgwọ maka ọrụ ịhụnanya gị, ọ bụghịkwa maka ofufe gị na idebe iwu okpukperechi gị.
Pol gosiri gị otu ụzọ ọ ga-esi wụpụ ịhụnanya nke Chineke n’obi anyị. Onye n diredu uche uche ya nye otuto nke Chineke, ma ghara run agbaso ososo akụnụba na otuto mmadu, na-abiakute Chineke nso, agbanwee obi ebere ya. Onye na-achọ otuto nke Chineke ga-emebi site na nganga nke onwe ya, ma ọ dịghị asọpụrụ onwe ya. Suchdị nchegharị a na-emeghee obi ya na mgbaghara nke Chineke, na-ejidekwa ebere ya dịka ọta ukwu. Onye obula nke huru anwu anwu, na-acho ndu ebighebi, ma were okwukwe nakwere ya, na etinye aka na ncheputa nke Mo ebighebi. Yabụ, kpachara anya, ọ bụghị ọrụ aka gị zọpụtara gị, mana agụụ ị na-achọ Chineke na-adọta ike ya n’adịghị ike gị, ịhụnanya ya ga-adọtakwa mkpụrụ obi gị ka i wee mezuo ebumnobi nke ịhụnanya ya. I gha acho Chukwu ma di ndu ebighi ebi?
Onye na eme ihe ojo, emeghi ya nihi na amuputara ya dika ihe di omimi nke edoziri anya ma nye mbibi, kama nihi na odighi njikere irubere eziokwu isi. A naghị eme ajọ omume na mberede. Ha bụ nsonaazụ nke ogologo oge na-ezighi ezi. Akọ na uche anyị na-emegide omume niile na-adịghị mma. Ọ na-akọcha anyị ma na-adọ anyị aka na ntị ka anyị ghara ime ihe ga-ewute mmụọ nsọ Chineke. Ma, onye n’onwe obi isi, ma ju olu nke Chineke, na-arara mmuo nke nnupụisi, na-eme mpụ ya n’echeghị eche, na-emebi akọ na uche ya. Ajọ omume anyị bụ ihe anyị mere n’enye anyị ọnwụnwa nke gbara anyị gburugburu, yana sinima, akwụkwọ, na ụlọ ọrụ, na n’uche nke obi anyị, nke na-adọta anyị ime ihe ọjọọ.
Onye ọ bụla nke na-emegide ịbịaru mmụọ nke Chineke na -adaba n'ikpe, na-emechi obi ya megide onyinye Chineke, na-eleda Onye Kachasị Elu anya, na-akpali iwe ya. Ntaramahụhụ Chineke ga-adakwasị ndị niile na-enupụ isi, na-eweta nsogbu na ahụhụ. Live bi n'ike nke Kraist, n'ọkwa ihunanya, ka ị na-agbada n'okpuru iwe nke Onye-ikpe na-eme ezi omume? Enweghi ike gaghị agbanahụ azịza nke ajụjụ a. Yabụ, jikere, kwadebe onwe gị maka ụbọchị nkewa na ezi ihe na ihe ọjọọ.
N'okwu ya na ndị Juu ga-ebu ụzọ kpee ikpe ahụ, Pọl bu n'uche na ọgbụgba ndụ ochie ahụ bụ nnukwu ọrụ ha, Chineke ga-ebukwa ha ụzọ zaa ajụjụ. Onye obula nke ndi Ju, site na oru nke Mo Nso, abiaru nso Chineke g’eji ebube nke Onye di ebube me ka. Ma onye ọ bula n’ime ha gara n’ihu n’agwa obi ya, a ga-eweda ya n’iru ndị ọzọ n’ọkụ ala mmụọ, n’ihi na o kweghị ka mmụọ nke Chineke gbanwee mmụọ nke nnupụisi n’ime ya.
Ndi Grik, Mongolio, na Negroes, ya na aguru nile na asusu nile, ga-enwe ikike ịbịaru Chineke nso, nihi na obu onye okike nke mmadu, ya na mmadu adighi enwe mmeko. Ha niile ha nhata. Ọbụnadị ndị bara ọgaranya ga-atụfu ịma mma ha tupu ebube ya mara mma. Anyị niile bụ ihe ọ bụla n’ihu Onye Okike nke ihe niile. Ndị nne ndị na-eje ozi n’ụlọ ha na ụmụnna nwoke dị mfe ga-enwu enwu na Mmụọ nke Kraịst karịa ndị bishọp, ndị isi ukwu na ndị isi elu.
Chineke g’eji ayị gosipụta ihunanya ya. Onye obula kwere ka agbanwere ya dika ihu-n'anya nke Chineke gha anabata gi. Ma onye ọ bula nke g hardme ka obi ya sie ike, hu kwa ya n'anya kari ndi ọzọ, g willsi n'ebe Chineke nọ puta ma kwuwa okwu. Onye-nwe-ayi bu onye kwesiri ntukwasi-obi. Ọ dịghị ele mmadụ anya n'ihu.
Anyi mara na odighi onye ezi omume n’onwe ya, ma obu obi ebere dika Chineke. Mana onye ọ bụla gbagoro isi iyi nke ịhụnanya bụrụ onye ezi omume, n'ihi na ike nke Nna nke eluigwe na-agbanwe ndị niile na-achọ ya. Ma eche echela na ụdị mgbanwe na njikere maka omume ebere nke Chineke na-eme ọsọ ọsọ. Mmeri nke mpako na-achọ oge, ma ọ bụ naanị mmadụ ole na ole chọrọ ịbụ ndị ohu nke ndị dara ada. Ọ bụ ya mere Jizọs jiri buru ụzọ gafee ma soro ndị na-akwa iko na ndị ọnaụtụ rie ihe, ka anyị wee gọnahụ obi anyị siri ike, nata obi dị nro ma hụ ndị mmehie n'anya dịka Chineke hụrụ ha n'anya.
Imara ụgwọ ọrụ nke ndị ji ọsuụ ogologo ntachi obi na-egosipụta? Chineke gaeji uwe nke ndi nile megheere mmụọ nke amara ime ha. Ya mere, njedebe nke Chukwu maka ụmụ mmadụ erughi atụmatụ mbụ ya. O kere mmadụ n’onyinyo ya, wee chọọ ịwụsịa otuto ya na agwa ya niile. Onye kachasi ihe nile elu sọpuru ndi mere ebere bayere ndi anqumeghi ihe ọjọ. Udo ya di n’ime obi nke ndi achupuru achupu ma juo ya n’ihi ezi omume ya.
Udi ikpe ahu bu ikewapu ndi obi di obi dika ndi gbanwere n’ebube nke Chineke, na ndi mere obi ha ike ka ha bia ndi nke Mmuo Nso ga-agbadata n’iru ha rue mgbe ebighi ebi na hel. Ekwela ka e duhie gị, Chineke; n’ihi na mkpụrụ ọ bụla mmadụ kụrụ, ya ka ọ ga-ewetakwa n’ubi.
EKPERE: O Onyenwe m, ihunanya m pere mpe, ma mmasi m buru ibu. Adịghị m ọcha n'ihu gị. Gbaghara m mmehie m. Meghee anyam abua n'ọrụ ebere Gi. Duzie m na ndụ ịchụ àjà na ezi ọrụ, n'ihi na ọ nweghị ezi ihe dị n'ime m. Zọputam n’aka Onwem, were obi-Gi mejue obi m n’anya, ka m wee choo ndi a leluru anya, ma soro ndi n’agha ghara inoko, hu ha n’anya ma gozie ha, dika Ichoro ndi n’ezoputa izoputa ha.
Gini bu iwu Chineke ụkpụrụ n'ime ikpe ikpe ikpeazụ?
Page last modified on January 25, 2021, at 03:28 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)